Home Wararka Ciidamo kawada tirsan DFS oo kala taageero laba garab oo ku dagaalay...
Ciidamo kawada tirsan DFS oo kala taageero laba garab oo ku dagaalay G. Gedo
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaaya gobolka Gedo waxaa maanta halkaas ka dhacay iska hor imaad u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda uu ka dhacay qeybo ka mid ah gudaha degmada Doolow oo ka tirsan gobolkaasi. Waraka ayaa intaas kuwadara in dagaalka uu si gaar ah u dhex-maray ciidamada nabad sugida Doolow iyo kuwa dowladda ee ka howlgala gudaha degmadaasi sida ay xaqiijiyeen oo sheegeen dgoobgoogayaal.
Is-raasaseynta labada dhinac ayaa in muddo ah socotay kaas oo uu dhaawacmay talityaha ciidanka nabad sugidda Doolow oo lagu magacaabo Xasan Cibaad iyo hal askari oo ka tirsan ilaaladiisa. Illaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee dhalisay dagaalka dhex-maray labada dhinac, balse mar qura ayey dadka deegaanka ka war-helin xabad dhaceysa.
Wararka ay sheegaya in ciidamada dagaalay ay kala taageeraan labo garab oo uu ku jiro garabka Cabdirashiid Janan. Waxaa lagu soo waramayaa in jawiga uu haatan deggan tahay, waxaana sidoo kale goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo ku baxsay shaqaaqadaasi. Weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmada oo la xiriira iska hor imaadkaasi dhaliyey khasaaraha.
Previous articleJames S. oo wada da’daalo lacag loogu raadinayo doorashada iyo ka hortaga Musuq-maasuqa
Next articleArmy drives out al-Shabaab terrorists from central Somalia strongholds